आज नेवार समुदाय भाइटिका लगाउँदै, सरकारले दियो सार्वजनिक विदा - Jhilko
आज नेवार समुदाय भाइटिका लगाउँदै, सरकारले दियो सार्वजनिक विदा
३ कार्तिक,२०७६ 156 0
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेवार समुदायले बुधबार किजा पूजा अर्थात् भाइटीका लगाउन लगाउँदै छन् ।
मंगलबार नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष भएकाले आज किजा पूजा मनाउन लागिएको नेवार समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् । बुधबार बिहान पनि केही समय द्वितीया तिथि रहेकाले भाइटीका लगाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
इराकी कर्बलामा १८ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु
सोलुखुम्बुको होटलमा बेलायती पर्यटक मृत फेला
बाबुरामले लेखेः सरकारको इँजार फुस्क्यो है !
५ कार्तिक,२०७६0187
‘चरम ‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर दुईतिहाई पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको...
नक्कली महको विगविगी
३ माघ,२०७५0544
बजारमा महको माग उच्च छ । मह बिक्रीका लागि भन्दै शहर बजारदेखि घरघरमा व्यवसायी आउने...
नारायणी नदीमा हामफालेकी महिलाको उद्धार, दुई बालबालिकाको...
५ श्रावण,२०७६0185
आमा स्वयंले दुवै बच्चा साथमा लिएर नारायणी नदीमा हामफालेकी थिइन् ।
महिलाको तस्बिरलाई नाङ्गो बनाउने ‘डीपन्यूड एप’ बन्द !
२ असार,२०७६0495
पचास अमेरिकी डलर मूल्य राखिएको डीपन्यूड एपमाथि मदरबोर्ड नामको वेबसाइटमा लेख छापिएपछि...